१९ ब’र्षिय यु’वतिले बनाइन् क’र’णी हु’नबाट ब’चाउने यस्तो पे’न्टी ! दु’निया भयो च’कित ! « गोर्खाली खबर डटकम
१९ ब’र्षिय यु’वतिले बनाइन् क’र’णी हु’नबाट ब’चाउने यस्तो पे’न्टी ! दु’निया भयो च’कित !
काठमाडौ – भारतकी एक यु’वतीले यस्तो पे’न्टी बनाएकी छिन्, जसले युवतीहरुलाई क’र’णीबाट बचाउन सक्छ । १९ वर्षकी सीनू कुमारी उत्तर प्रदेशको र्फरुखाबाद जिल्लाको एक निम्न मध्यमवर्गीय परिवारका हुन् । उनले बनाएको ‘रेप प्रुफ पे’न्टी’मा एक प्रकारको लग लागेको हुन्छ, जसले क’र’णीबाट बचाउनसक्छ । ब्लेड प्रुफ कपडा प्रयोग गरिएको छ, जसलाई का’ट्न वा ज’लाउन सकिँदैन । साथै स्मार्ट लक, जीपीआरएस र एक रेकर्डर पनि छ ।
स्मार्ट कल पासवर्डले मात्र खुल्नेछ । सीनू भन्छिन्, ‘यसमा एउटा बटम छ, जसलाई थिच्नासाथ इमर्जेन्सी वा १० नम्बर डायल हुनेछ ।’ उनका अनुसार पे’न्टीमा राखिएको जीपीआरएसको मदतमा प्रहरीले लोकेसन पत्ता लगाउनेछ र रेकर्डरले आसपासमा जे भइरहेको छ, त्यसलाई रेकर्ड गर्नेछ । पुलिसका अलावा परिजमरका कुनै सदस्यको नम्बर सेट गर्न सकिन्छ ?
सीनू भन्छिन्, यो सेटिङमा भरपर्छ कि इ’मर्जेन्सीमा पहिला कसलाई कल गर्ने ? किनकी १०० र १०९० नम्बर सँधै सुरक्षाका लागि हुनेछ र पुलिस स्टेशन सबै ठाउँमा हुनेछ । त्यसैले यो नम्बर सेट गरिएको हो ।’ यो बनाउन लगभग ४ हजार भारु खर्च भएको छ ।आफैंले रिसर्ज गरेर पे’न्टी बनाएको उनले बताएकी छिन् । सरकार वा कुनै कम्पनीले सहयोग गर्ने हो भने यसलाई अझ राम्रो बनाउन सकिने उनले बताएकी छन् ।
पोखरामा एक महिलाको दाहसंस्कारपछि मात्रै कोरोना पुष्टि : सय बढी थिए मलामी